I-CSAT ibonelela ngolondolozo lweLOT Polish Airlines Boeing 737 MAX jets
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-CSAT ibonelela ngolondolozo lweLOT Polish Airlines Boeing 737 MAX jets
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeCzechia Breaking • iindaba • Iindaba zasePoland • Xanduva • Technology • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iinqwelo-moya ze-Boeing 737 MAX ziyabandakanywa kwiinqwelomoya ezihamba ngeenqwelo moya kwihlabathi liphela
I-CSAT ikwandisile ukunikezelwa kweenkonzo ezibonelelwa licandelo lolondolozo lwesiseko
Ukuhlaziywa kweyona nguqulelo yanamhlanje ye-Boeing 737 MAX kuya kubonelelwa kwi-hangar yase-Czech MRO eVáclav Havel Airport ePrague
I-Boeing 737 MAX iya kufunwa ngakumbi ngenxa yemeko yangoku yenqwelomoya
Iiczech Airlines Technics (CSAT) ngoku iya kubonelela abathengi nge-Boeing 737 MAX yolondolozo. Enkosi kugunyaziso olutsha lwenkampani olufunyenwe kwi-Civil Aviation Authority ye-Czech Republic, i-CSAT ikwandisile ukunikezelwa kweenkonzo ezibonelelwa licandelo lolondolozo lwesiseko. Ukuhlaziywa kolona hlobo lwanamhlanje lolu hlobo lwenqwelomoya kuya kufuneka lubonelelwe kwindawo yokuhlala yaseCzech MRO eVáclav Havel Airport ePrague. ULOTE Polish Airlines waba ngumthengi wokuqala we-Boeing 737 MAX phakathi ku-Epreli 2021.
“Iinqwelo-moya ze-Boeing 737 MAX ziyabandakanywa kwiinqwelomoya emhlabeni wonke. Ke ngoko, sithathe isigqibo sokuba ngoku lixesha elifanelekileyo lokwandisa ipotifoliyo yethu yenkonzo ngolu hlobo lwenqwelomoya, ngaloo ndlela sinika abathengi uncedo lwethu ekubuyeni kwabo ngokuthe ngcembe kwinkonzo. Ukongeza, iinqwelo-moya ezizolileyo, ezinoqoqosho ngakumbi nezikulungeleyo okusingqongileyo ziya kufunwa ngakumbi ngenxa yemeko yangoku yenqwelomoya kunye nokugxininiswa ngakumbi kuhambo oluzinzileyo. Kananjalo, baya kuba sisikhokelo secandelo lethu lokugcina isiseko, kananjalo "uPavel Haleš, uSihlalo weCzech Airlines Technics Board of Directors, utshilo.
I-LOT Polish Airlines ngumthengi wokuqala ekungenwe kuye yi-CSAT kwisivumelwano sentsebenziswano emva kokufumana isigunyaziso esitsha. Ukusukela phakathi ku-Epreli ka-2021, oomatshini be-CSAT bebesenza i-Boeing 737-8 MAX (ubhaliso lwe-SP-LVB) kulungiselelwa umphathi wesizwe wasePoland. Olu lolona hlobo lokuqala lwembali lwendiza lwenziwa kwi hangar F ePrague. Ukongeza, ukwandiswa kwepotifoliyo yenkonzo yolondolozo lwesiseko iya kukhuthaza intsebenziswano yexesha elide kungekuphela nje ngeLOT, kodwa kunye nabanye abathengi abavela kwicandelo labaphethe umoya kunye neenkampani zokuqeshisa.
Umsebenzi weSiseko soLondolozo ikwayinxalenye yephakheji yeenkonzo ezinikezelwa yiCzech Airlines Technics kubaxumi abanomdla wokupaka iinqwelomoya ixesha elide. “Njengokuba kukho imfuneko enkulu yokugcinwa kweenqwelomoya kwintengiso, siza kukhusela ukupakwa kweenqwelomoya ezongezelelweyo zeBoeing 737-8 MAX eVáclav Havel Airport ePrague yeenkampani ezinkulu zokuqeshisa kwezi veki zizayo. Ngombulelo ekwandisweni kwesigunyaziso secandelo lethu lolondolozo olusisiseko ngolu hlobo lwenqwelomoya, siza kubonelela abanini bolondolozo lwee hangar kwaye siqinisekise ukuba inqwelomoya ingena nje xa kufunyanwa abasebenzi abatsha, ”wongeze watsho uPavel Haleš, ephawula ngokufezekiswa kwale nkampani.
Kunyaka ophelileyo, ngaphandle kwe-COVID-19 ubhubhane, obenefuthe elikhulu kwicandelo lokuhamba ngenqwelomoya, iCzech Airlines Technics ikwazile ukugqibezela ngempumelelo ngaphezulu kwama-70 okulungiswa kwesiseko kwiBoeing 737, kwiAirbus A320 Family nakwinqwelomoya zeATR. IFinnair, iTransavia Airlines, iCzech Airlines, iiSmartwings kunye neNEOS zezona zibaluleke kakhulu kubathengi beCzech Airlines Technics kwicandelo lokugcina iziseko. Kwi-2020, iqela loomatshini be-CSAT lisebenze nakwiiprojekthi zabathengi abatsha, ezizezi iJet2.com, iAustria Airlines kunye nabathengi abavela kurhulumente nakumacandelo abucala.